कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ चैत्र ३०, सोमबार ११:५५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित भएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइ गोविन्दराजको चितवनमा निधन भएका कारण बैठक स्थगित गरिएको मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणको तथ्यांक केन्द्रमा पठाउने समय थपबारे छलफल गर्न आजको लागि बैठक बोलाइएको थियो । आगामी बैठकको मिति भने तय गरिएको छैन ।
Spread the loveकाठमाडौं । जनमत पार्टीको अध्यक्षमा डा. सीके राउत चयन भएका छन् । जनकपुरधाममा भएको पहिलो महाधिवेशनले निर्वाचनका माध्यमबाट नयाँ कार्यसमितिको चयन गरेको हो । अध्यक्षमा डा. राउतको मात्रै उम्मेदवारी परेको उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । अन्य पदका लागि भने मतदान भएको थियो । निर्वाचनबाट उपाध्यक्ष पदमा मोहम्द […]